Oomatshini abasebenza nge-shaft shredder basebenzisela ukutshiza iplastiki, umbhobho, iinkuni, ibhodi ye-elektroniki njalo njalo. Umgangatho onokuqiniseka ngawo. Njengomatshini wokukroba, sifumene ifomu yelungelo elilodwa lobunikazi kurhulumente wase-china ngo-2013.
Oomatshini abasebenza nge-shaft shredder benzelwa ukutshiza iiplastiki ezithambileyo, iingxowa ezilukiweyo, amalaphu, inkunkuma yesixeko, ibhodi ye-elektroniki njalo njalo. Umgangatho onokuqiniseka ngawo. Njengomatshini wokukroba, sifumene ifomu yelungelo elilodwa lobunikazi kurhulumente wase-china ngo-2013.
Inkqubo ye-flowof Pellet yokuvelisa umatshini: Isithuthi → izinto zokwenza izinto zecompor (feeder) → Inkqubo eyandisiweyo → Inkqubo yokufa kunye nesantya esiphakamileyo sokutshintshiselana kwenkqubo → inkqubo yokuhambisa umsesane wamanzi / inkqubo yohlobo lwe-noodle → umatshini wokuhambisa amanzi → iseyifu yomoya